Ukwakha I-Digital Roadmap Yamabhizinisi Abheka Phambili | Martech Zone
Ukwakha I-Digital Roadmap Yamabhizinisi Abheka Phambili
NgoMgqibelo, Okthoba 24, 2020 NgoMgqibelo, Okthoba 24, 2020 Tim Duncan
Selokhu kwaqubuka ubhadane, sabona inguquko yedijithali, ngokushintshela emsebenzini okude nokufinyelela okwengeziwe kwidijithali kwezinsizakalo kunanini ngaphambili - ukuthambekela okungenzeka kuqhubeke ngemuva kobhadane. Ngokuvumelana ne McKinsey & Company, seqe iminyaka emihlanu phambili ekwamukelweni kwabasebenzisi nabamabhizinisi kwidijithali ngendaba yamasonto ambalwa nje. Ngaphezu kwe Amaphesenti angama-90 abaphathi balindele ukuwa okuvela ku-COVID-19 ukushintsha ngokuyisisekelo indlela abenza ngayo ibhizinisi kule minyaka emihlanu ezayo, cishe abaningi abazogqamisa ubhadane bazoba nomthelela ohlala njalo ekuziphatheni nasezidingweni zamakhasimende. Ngempela, amaphesenti angama-75 wabathengi abathole idijithali okokuqala selokhu uhlelo lobhadane lokuqhubeka ngemuva kwe-COVID-19. Bajoyina ibutho elikhulayo le- Amakhasimende axhunyiwe, abasebenzisana kuphela nemikhiqizo ngamashaneli edijithali njengamawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza.
Amakhasimende axhunyiwe, ahlanganisa sonke isizukulwane, yi-hyperaware yolwazi lomkhiqizo jikelele futhi asejwayele izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme online. Lawa makhasimende aqhathanisa okuhle nokubi, hhayi imikhiqizo nezinsizakalo ezincintisana ngqo. Bazokwahlulela okwenzeka ku-Uber nalokho kwe-Amazon, futhi okuhlangenwe nakho okujabulisa kakhulu kuzoba ukulindela kwabo okuncane kokulandelayo. Ingcindezi iyaqhubeka nokwanda yokuthi izinkampani zinake kakhulu imikhiqizo engaphandle kwesikhala sazo futhi zihambisane nezinto ezintsha ezisanda kwenziwa. Umbiko we-HBR ubalula isizathu sokuqala ukuthi ngaphezu kwalokho uhhafu (amaphesenti angama-52) we-Fortune 500 anyamalale kusukela ngonyaka ka-2000 ukwehluleka kwabo ukuthola ushintsho lwedijithali. Ukuqinisekisa ukuthi iziteshi zedijithali zihambisana, noma zingcono kunezo, izimbangi eziqondile nezingaqondile kuzoba yinto ebalulekile ekukhuleni okusimeme.
Ukuthuthukisa Uhambo Lwamakhasimende
Isimo sanamuhla esixhunywe nge-hyper, kuhambisana nomthelela walolu bhubhane, kusheshise ukulindelwa kwabathengi ngendima edlalwa yidijithali kulwazi lomkhiqizo womzimba. Ezinkampanini eziningi, uhambo lwamakhasimende oluku-inthanethi luvame ukuphulwa futhi luphelelwe yisikhathi, njengoba sekube nzima kakhulu kubathengi ukuthi babe nesipiliyoni esihle lapho behlanganyela nomkhiqizo wedijithali.
I-COVID-19 iphinde yaveza amanye amaphuzu wezinhlungu zamakhasimende angaziwa ama-digital angasiza ukuwaxazulula. Izinto zohambo lwamakhasimende ezibangele ukukhungatheka okwandulela ubhadane, njengokulinda ulayini nezinkokhelo, manje kufanele zenziwe zingathintwa futhi ziphephe ngangokunokwenzeka, zifuna ukungenelela kwedijithali. Umgoqo wokwenza kahle manje usukhuphuke kakhulu; Izinguquko zesikhathi eside ekulindelweni kwabathengi kokusebenzelana okulinganiselwe kwabasebenzi zizoqhubeka.
Ukuze inhlangano iqale ushintsho ngekusasa labo ledijithali, kubalulekile ukuhamba ngejubane nenjongo, nokususa ama-silos. Ukumaketha komkhiqizo, ulwazi lwamakhasimende, ukwethembeka nokusebenza konke kufanele kuhlanganyele ukusekela izinhloso ezivamile. Ukulungisa uhambo lwamakhasimende olwephukile nokufeza izinhloso zokukhula, wonke umuntu enhlanganweni kumele ahlangane azungeze umbono ofanayo wedijithali. Lo mbono kufanele uhunyushelwe esenzweni ngokwakha izinhlelo zedijithali - kunamaphrojekthi edijithali - ngokugxila okungapheli kwikhasimende. Izinhlangano ezithwalwe izingqondo zephrojekthi yesikhashana namaqembu athunyelwe ngamakhompiyutha azokwakha okuhlangenwe nakho okungakhuthazi kwamakhasimende futhi ashiye amathuba amakhulu okukhula etafuleni. Ngakolunye uhlangothi, isenzo embonweni ojwayelekile wokusebenza kahle kwedijithali sizoletha imbuyiselo ethembisayo. Kuzoba yilezo zinkampani ezinamaqembu ahlanganisiwe - zisebenzisa, zifunde kusuka, futhi zisebenzise ukuqonda kwemininingwane - ezizokwazi ukuhamba ngokushesha nangobufakazi besikhathi esizayo.
Inhlangano ingawubona kanjani umbono wayo wedijithali?
Ngombono wesikhathi eside engqondweni, ukuchaza izindlela zamasu okukhula okubanzi ezinkampanini okubaluleke kakhulu. Lokhu okubalulekile kungahle kuhlobene nokwehlukanisa, inani, ikhwalithi, noma ukuhleleka kwenkundla yokudlala yokuncintisana, futhi kufanele kuhambisane nombono wenkampani jikelele wedijithali.
Ngenkathi kucaciswa ohambweni lwenkampani ngayinye kanye nezinga lamanje lokuvuthwa kwedijithali, nazi izimiso ezithile ezibalulekile wonke amabhizinisi okufanele azicabangele ukulungela ngokwamanani okujwayelekile okusha:
Okuhlangenwe nakho okulula, okungalibaleki, nokuhleleka - vumela amakhasimende ukuthi enze ngokushesha futhi kalula lokho afuna ukukwenza
Sebenzisa okuthandwa nguwe uma kungenzeka - Sebenzisa ubuchwepheshe ukusebenzela kangcono izidingo zabathengi
Khuthaza imvamisa futhi ushayele ukwethembeka - Sebenzisa amandla wedatha ukuqonda ukusebenza nokuzikhuthaza
Hlanganisa ubuchwepheshe obukhona futhi usebenzise amandla abo ngokuhlanganyela - ukuphela kwendlela ukukhula okuzokala ngayo ngesitaki se-tech esihlelwe kahle futhi esinamandla
Dilizani amasilosi - thola izindlela zokusebenzisana ngenhloso ukuze kuzuze okuhle kakhulu
Ucezu olukhulu lwezeluleko noma yiliphi ibhizinisi elingaluthatha kulesi simo sezulu samanje ukuhlela ikusasa, hhayi namuhla. Yonke imikhiqizo kufanele ilwele futhi igcine umgwaqo ophelele wedijithali ukushayela ukusimama nokukhula kwemali engenayo. Uma le nkinga isifundise noma yini, ngukuthi asikho isikhathi esingcono sokuhlela nokwenza izinto ezintsha ngomhlaba owanda ngokwamakhompiyutha.
Tags: ushintshoamakhasimende axhunyiwei-covid-19umgwaqo wedijithaliumbono wedijithali
UTim Duncan uyi-Product Growth Practice Lead eBottle Rocket, egxile ekusizeni imikhiqizo ukukhulisa izenzo zenani ngaphakathi kwesipiliyoni sabo sekhasimende ngokwenza kahle ukutholwa, ukuguqulwa, ukubandakanyeka nokugcinwa kwamamethrikhi. Ngaphambi kweBottle Rocket, uTim wasebenza e-IBM njengeBusiness Process Management Consultant, waphothula iziqu ze-University of Oklahoma nge-Civil Engineering.
Kusetshenziswa amafomu e-WordPress ne-Gravity ukuze kuthathwe ukuhola